दुर्लभ शंखहरुको दर्शन गरि पूरा पढ्नु होस ! मिल्नेछ चमत्कारिक लाभ… - Sabal Post
दुर्लभ शंखहरुको दर्शन गरि पूरा पढ्नु होस ! मिल्नेछ चमत्कारिक लाभ…
२५ चैत्र २०७५, सोमबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
तपाई भाग्यमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन गरि यसको महत्व जानी शेयर गर्नुहोला जिवनमा धन, सम्पती र खुसी पाउँनुहुनेछ । तपाईलाई सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ कि संसारमा ५० हजार भन्दा धेरै प्रकारका शंख पाइन्छ । त्यहि ५० हजार मध्यमा कुनै प्रकारको शंख तपाईको घरमा हुन सक्छ। ती शंख मध्य केहि दस शंखका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोग गरिन्छ ।
शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो यसका बारेमा त सबैंलाई जनकारी छ । जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो ।धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ । शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ ।लाखौं शंखमा दाहिना शंख एउटा पाइन्छ ।
मावर्ति शंख यो शंख : प्राय बायाँ हातबाट पकडिइने गरिन्छ। यस शंख मिल्न धेरैनै दुर्लभ मानिन्छ भने यसलाई भेट्न असम्भवनै रहने गर्छ। यस शंख चमत्कारिकले भरिपुर्ण हुन्छ भने यसको घरमा स्थापना संगै दरिद्रता हट्छ भने धन प्राप्तिको शृंखला सुरु हुने गर्छ।
मणिपुष्पक शंख : शंख महाभारत कालमा सहदेव बजाउने गरेका थिए। यस शंखले परिवारको सम्पूर्ण मनोकामना पुरा गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिन्छ। यस शंखको प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई हृदय रोग नलाग्ने विश्वास गरिन्छ भने शरीर स्वस्थ रहन्छ।
नीलकंठ शंख : यस शंख धार्मिक ग्रन्थका अनुसार भगवान शिवले समुन्द्र मन्थनको क्रममा निक्लेको विष शेवन गर्ने क्रममा नीलकंठ शंख माथि राखेर विष शेवन गरेको थिए। यस शंख घरमा स्थापना गर्दा विषालु जनावरले दुख नदिने विश्वास गरिन्छ। यस शंखमा गाईको दुख राखेर पिउने गर्नाले स्वास्थ्य राम्रो हुने विश्वास गरिने गरिन्छ।
चक्र शंख : यस शंख भगवान विष्णुको साथमा सधै रहने गर्छ। यस शंख भगवान विष्णुले राक्षसको वधको लागि प्रयोग गर्ने गरेको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई अद्भुत कल्याणकारी साथै चमत्कारी शंखको रुपमा लिने गरिन्छ।
कांग्रेसले सार्वजनीक गर्यो १८ बुँदे आर्थिक नीति
राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारमुक्त नबनाएसम्म समृद्धि असम्भव
नयाँँ ब्यबस्थापनका साथ पुन सञ्चालनमा बाइकर्स क्याफे…
सहोदर दिदिबाटै बहिनीमाथि अन्याय गरेको भन्दै हारगुहार
‘छ माया छपक्कै’मा अभिनेत्री सुपुष्पा भट्ट अनुबन्धित
राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक अवस्थाका आधारमा राहत वितरण…
कुन बैंकको आर्थिक अबस्था कस्तो ?